Xfce | मा कर्सर विषयवस्तु सेट गर्नुहोस् लिनक्सबाट
Xfce मा कर्सर विषयवस्तु सेट गर्नुहोस्
हामी जो ती प्रयोगकर्ताहरू हौं Xfce हामीलाई थाहा छ कि कर्सर थिम परिवर्तन गर्नका लागि हामीले जानु पर्छ मेनू »सेटिंग्स» माउस »विषयवस्तु।
तर कम्तिमा मेरो मामलामा यो पूर्ण रूपमा प्रभावकारी छैन, किनकि निश्चित र केहि अनुप्रयोगहरूमा यसले चयन गरिएको विषयवस्तु सहि देखाउँदैन। कसरी हामी पूरै प्रणालीको लागि कर्सर थिम उस्तै बनाउने?
धेरै सरल, हामी के गर्छौं हाम्रोमा सिर्जना हुन्छ / घर फाईल .Xdeafults र हामीले यसमा निम्न रेखा राख्यौं:
कहाँ ब्लुकुर्भ-इन्भर्स-FC4 फोल्डरको नाम जहाँ कर्सर विषयवस्तु अवस्थित छ।
त्यो हो, यदि हामी मानौं हामीसँग कर्सर थिम भनिन्छ Adwaita, जो भित्र छ ~ / .icons / Adwaita o / usr / सेयर / आइकन / Adwaita, त्यसपछि लाइन यस्तो देखिनेछ:
हामी सत्र र voila पुन: शुरू!
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » स्वरूप / निजीकरण » Xfce मा कर्सर विषयवस्तु सेट गर्नुहोस्
राम्रो सुझावहरू, उही चीज मलाई भयो जब मैले Xfce: D लाई कस्टमाइज गर्‍यो। मैले सम्पूर्ण आकारको लागि समान कर्सर हुने आकार फेला पार्न सकेन। मलाई आशा छ यो मेरो लागि उपयोगी छ। चियर्स!
सल्लाह को लागी धन्यवाद ...
@ Jlcmux भन्यो
मैले यो धेरै चोटि गरिसकेको छु र यसले काम गर्दैन। यो डिफल्ट थिमबाट थीममा जान्छ जुन मैले परिवर्तन गरेको छु।
मैले यो पहिले नै जुबन्टुमा गरिसकें र यसले काम गर्यो तर डेबियनमा कि म अब हुँ यो काम गर्न चाहँदैन। ध्यानमा राख्दै कि यो XFCE को समान संस्करण हो। (4.8) यो अनौंठो हो
यसको लागि कुनै डाटा?
@ Jlcmux लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते। तपाईले भनेको कुरा मैले गरेको छु र अहिले कुनै समस्या छैन। धन्यवाद। तर मसँग एउटा प्रश्न छ कि मँ तपाईलाई कसरी समाधान गर्ने जान्न चाहान्छु, जबकि मलाई लाग्दछ कि यसले तपाईले हामीलाई दिनु भएको बहुमूल्य जानकारीलाई मिल्नेछ। त्यहाँ कर्सर को आकार कम गर्न को लागी एक तरीका छ? मसँग एक छ जुन मलाई मन पर्छ तर म यसलाई सानो बनाउन सक्दिन। विन्डोमा जहाँ यो विनियमित हुन्छ यो १ 16 भन्दा कम हुँदैन (पिक्सेल, म अनुमान गर्छु) र मेरो लागि यो विशाल छ। मैले XFCE डिस्चार्जमा भन्नु पर्छ कि म नेटबुक प्रयोग गर्छु। हुनसक्छ त्यसैले यो मलाई धेरै महान् लाग्छ! म तपाईंको टिप्पणीको लागि पर्खिरहेको छु। धन्यवाद elav!
यद्यपि यो लेखलाई परित्याग गरिएको छ जस्तो देखिन्छ, म फेरि सहायताको लागि अनुरोध गर्दछु, यदि केही परोपकारी आत्माले हामीमध्ये जो यस व्यवहारबाट पीडित रहन्छन् को लागि दया दर्शाउँछ। यो चालले काम गर्दैन, मैले त्यसबेलादेखि धेरै Xfce स्थापना गरें र समस्या रहिरह्यो। यदि कोहीले सबै अनुप्रयोगहरूमा कर्सर स्थिर राख्नको लागि व्यवस्थित गरेको छ, कृपया कसरी उनीहरूलाई बताउनुहोस्।
राम्रो, मैले तपाईले भनेको कुरा गरें तर केहि गरेनन्, सामान्य स्थितिमा कर्सर पूर्वनिर्धारित हुन्छ, यो अन्य राज्यहरूमा अर्को कर्सरमा मात्र परिवर्तन हुन्छ। के गर्न सकिन्छ? मसँग डेबियन टेस्टिंग छ।
तपाईको मद्दतको लागि गहिराइमा Xfce लाई चिन्नुहोस्
तपाईको HDD पार्टिसनको UID जान्न २ तरिकाहरू